asalsashan » बिस बर्ष पछि पक्कि घरमा बास बिस बर्ष पछि पक्कि घरमा बास – asalsashan
बिस बर्ष पछि पक्कि घरमा बास
आईते बुढाको पहिलेको घर ।
नेपालगञ्ज/हरित अभियानका अभियन्ता हेमन्तराज काफ्ले सितल चिनिको बिरुवा बाँड्छन् । सितल चिनिको खेती गर्ने कोहलपुरका लोकेन्द्र सुनारको निमन्त्रणामा खेती हेर्न २०७६ मंसिरको अन्तिम साता काफ्ले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडानं ४ स्थित नौवस्ताको चिल्नेटा पुगे । उनले खेती त हेरेनैं । खेतीसँगै २१ औं शताव्दिमा पनि चरम गरिविमा जीवन गुजारिरहेका एक बृद्धको छाप्रो समेत हेर्न भ्याए ।
६० बर्षिय आईते बुढाको परिवार आघा कर्कट पाता र आधा टायलले छाएको एक कोठे छाप्रोमा ४ जनाको परिवार परालको बिछ्यौनामा परालनै ओढेर सुत्ने गर्नुका साथै बाख्रा समेत त्यहि गोठमा बाँध्ने गरेको कहालि लाग्दो दृश्य देखेर भावुक भएर एक हजार प्रदान गरेर नेपालगञ्ज फर्के ।
नेपालगञ्ज पुग्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देशमा सर्बहारा बर्गको पार्टी कम्युनिष्टको सरकार छ, नौवस्तामा आईते बुढा पराल ओढेर परालमैं सुत्छन् । यो कस्ता बिडम्वना सबै मिलेर केही सहयोग गर्ने की भनेर स्टाटस पोष्ट गरे ।
सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागिरहेका काफ्ले अलि बढि भावुक भएका कारण उनको स्टाटसलाई धेरैले पत्यायनन्, पत्याउनेहरुले सहयोग गर्न शुरु गरिहाले । काफ्लेको अगुवाईमा बिभिन्न व्यक्तिहरुले लत्ता, कपडा र खाद्यान्न सहयोग गरे । काफ्लेले एकल रुपमा शुरुवात गरेको सहयोग अभियानलाई सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय देखि कार्यरत संस्था बासले संस्थागत पहल गर्ने निर्णय गर्दै अभियानलाई अघि बढायो ।
सो कार्यका लागि काफ्लेकै संयोजकत्वमा आईते बुढा सहयोग समिति बासले गठन गर्यो । जसमा बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, स्थानीय लोकेन्द्र सुनार, पत्रकार कमल खत्री र बामदेब न्यौपाने न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।
आईते बुढाको अहिलेको नयाँ घर ।
समितिले आर्थिक सहयोग संकलन गरि बुढाको घर बनाईदिनुका साथै बसोवासको उचित प्रबन्ध गरिदिने उद्धेश्य लिएको थियो सोही बमोजिम सहयोग संकलन कार्य अघि बढ्यो ।
आउनै लागेको बर्षातमा बुढाको बसाईमा समस्या हुने देखेर सहयोग समितिले समितिका सदस्य लोकेन्द्र सुनारको संयोजकत्वमा निर्माण समिति गठन गरि लकडाउनकै बिचमा २ कोठे घर निर्माण कार्य शुरु गरियो । १५ दिनको अवधिमा संकलित रकम संकलित रकम रु. १ लाख ५३ हजार ४ सय ८८ रुपैंयाको लागतमा दुई कोठे पक्कि घर र शौचालय निर्माण भयो ।
बिभिन्न सहयोगीहरुबाट संकलित रकमबाट बनेको घर असार १० गते बुधबार बुढालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले आइते बुढालाई चापि प्रदान गरेर बुढलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । घरको चाबी प्राप्त गरेपछि हर्षित हुदै ६० बर्षिय आईते बुढाले खुसी व्यक्त गरे । उनले आफ्नो जीवनमा घरमा बस्न पाउँला भन्ने कल्पना समेत नगरेको बताए । गरिबीका कारण असहज जीवन विताईरहेको अवस्थामा निश्वार्थ रुपमा घर बनाई सहयोग गर्ने सबैलाई उनले धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए ।
आईते बुढालाई घरको चापी हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सभा सदस्य आई.पि. खरेल ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एबम् प्रदेश सभा सदस्य आई पि खरेलले अभियानबाट पक्कि घर निर्माण गर्नु निकै ठुलो कुरा भएको भन्दै सो अभियानमा सक्रिय सबै अभियन्ताहरुलाई धन्यबाद ज्ञापन गरे । उनल भने– घर निर्माण गर्नु सामान्य कुरा होईन सरकारले समेत गर्न नसकेको काम घर निर्माण समितिले गरेको छ जुन प्रशंसनिय कार्य हो । एउटा गरिब परिवारको मुहारमा हासो र खुसी ल्याएको भन्दै यस्तो उत्कृष्ट कार्यको सबैले सिको गर्न समेत उनले अपिल गरे ।
जाजरकोटबाट २० बर्ष अघि बसाइँसराइ गरि आएका आईतेका परिवारमा १० वर्षका एक छोरा रामबहादुर, १३ वर्षकी छोरी सिर्जना र ४७ वर्षकी पत्नी सीता रहेका छन् । वरिपरि सबैका घर पक्कि, राम्रा भएता पनि आईतेको घरको अवस्था मात्रै बिजोगपूर्ण थियो । गरिव अवस्थाका आईते दैनिक मजदुरी गर्दछन् । आईतेकी श्रीमती बोली सम्बन्धिको अपाँगता छिन् । मज्दुरी गर्ने एक जना मात्रै भएकाले परिवारको अवस्था कमजोर भएको छिमेकीहरु बताउँछन् ।